ကိုယ်ဝန် အလွယ်တကူ ပျက်ကျစေ နိုင်သော အချက်များ | Buzzy
ကိုယ်ဝန် အလွယ်တကူ ပျက်ကျစေ နိုင်သော အချက်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို လျော့နည်းအောင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေသော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိကာ ကြိုတင် သတိပြု ကာကွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အပြည့်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှု ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု စသော အပြောင်းအလဲများစွာ ကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားရသော အချိန်ဖြစ်သည် ။ စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချ ထားသော အိမ်ထောင်များတွင်သာမက မတော်တဆ ရရှိလာသော ကိုယ်ဝန်များပင်လျှင် မိမိ၌ ရောက်ရှိလာသော သားသမီးများအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို အမှားအယွင်း မရှိအောင် ပြင်ဆင်ကြရသည် ။ အများဆုံး ကြောက်ရွံမှုမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားမည်ကိုပင်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို လျော့နည်းအောင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေသော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိကာ ကြိုတင် သတိပြု ကာကွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည် ။
သင်နေ့စဉ် စားသုံးနေသော အသီးအနှံ တချို့ နှင့် အပြုအမူများသည် ကိုယ်ဝန်ကို အလွယ်တကူ ပျက်ကျစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား ?
Angelica (ယိုထိုးထားသော စမြိတ်ပင်ပျော့ -ကိတ်မုန့်အလှချယ်မှုန်းရာတွင် သုံးသည် )
အစောပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလများတွင် ဤစမြိတ်ပင်ပျော့ ပါဝင်သော အစာများကို ပုံမှန်စားသုံးမိပါက သားအိမ်ညှစ်အားဖြစ်ပွားလာစေကာ နုနယ်သေးသော ကလေးကို ပျက်ကျစေနိုင်သော သဘာဝထွက်ကုန်ဖြစ်ပါသည် ။
သင်သည် ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးလေ့ရှိပါသလား ? ခပ်ပူပူရေနွေးဖြင့် ရေကို ပုံမှန်ချိုးခြင်းသည် သားလျောသားပျက်ဖြစ်စေသော အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လေသည် ။ အချို့ သည် ဆေးဖက်ဝင်အရွက်များဖြင့် ကျိုကာ ရေနွေးငွေ့ ပေါင်းခံရေချိုးခြင်းကို မွေးကင်စတွင် ပြုလုပ်တတ်ကြသည် ။ သားအိမ်ရှိ အညှစ်အကြေးများ သွေးပုပ်များကင်းစင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည် ။
ဗီတာမင်စီ ၌ သဘာဝအလျောက် သားအိမ်ကို ညှစ်အားကောင်းစေသော အကျိုး အာနိသင် ပါရှိသည် ။ ရှောက်နွယ်ဝင် အချဉ်ဓာတ်များပါသည့် အသီးအနှံတို့တွင် လုံလောက်စွာပါရှိသည် ။
လေ့လာချက်များအရ သင်္ဘေားသီးသည် အမျိုးသမီး အများစုတွင် သားပျက်စေသော အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန် လနုစဉ်တွင် ရှောင်သင့်သည့် အသီးအနှံဖြစ်သည်။
နာနတ်သီးရှိ ဗီတာမင်စီ enzymes မှ သားပျက်သားလျောစေနိုင်သည် ။ လေ့လာချက်များအရ လတ်ဆတ်သော နာနတ်သီးများကို ပုံမှန်စားသုံးခြင်းနှင့် နာနတ်သီးဖျော်ရည်အား နေ့စဉ် ခုံမင်စွာ သောက်သုံးတတ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် သားလျောခြင်း ပိုမို သက်ရောက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ။
နှမ်းစေ့ကို လက်တစ်ဆုပ်စာ စားသုံးခြင်း နှင့် ရေတွင် စိမ့်ဝင်အောင် စိမ်ထားသော ရေတို့ကို နံနက်ခင်းတွင် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင် သားလျောအောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ဟင်းလျာများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရုံဖြင့် အနိသင် သက်ရောက်နိုင်သော ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နှမ်းစေ့ နှစ်ဆီ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်သင့်သည် ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်တွင်လည်း သားအိမ် ကျုံအားညှစ်အားကို ဖြစ်စေသော အာနသင်ရှိများစွာပါဝင်သော ကြောင့် သားလျောသားပျက် ဖြစ်စေနိုင်သည် ။ ကိုယ်ဝန်သည်များအတွက် ဟင်းလျာများနှင့် ဆေးဝါးတို့တွင် ထည့်သွင်းအသုံးမပြုသင့် ။
ပြင်းထန်စွာ တက်ကြွ လှုပ်ရှားမှု နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျစေနိုင်သော အဓိက အချက်ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းကာလများတွင် မကြာခဏ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ပြုလုပ်ပါက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ နှင့် သားအိမ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ သားလျောနိုင်သောကြောင့် ဆင်ခြင်သင့်သည် ။ ထို့အပြင် ပြင်းထန်သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုများကို ရျောင်ရှားသင့်သည် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတွင် ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု များ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည် ။ စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့် ပုံမှန် အိပ်မပျော်ခြင်း မစားနိုင်မသောက်နိုင်ဖြစ်ခြင်း အဟာရချို့ တဲ့ လာခြင်းစသော ပြဿနာများစွာ ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုး သမှးတစ်ဦးအနေဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းအောင် တရားထိုင်ခြင်း ၊ အဟာရလုံလောက်စွာ စားသုံးခြင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန် ဆရာမများထံမှ အကြံညဏ်ရယူခြင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အချင်းချင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့ ကာ မျှဝေခြင်း စကားစမြည်ပြောခြင်း စသည်တို့ကို ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်သင့်သည် ။
Ref . stylesatlife.com